Mid kamid ah Dowladaha Carabta oo sheegtay in Soomaaliya ku abaal dhacday Imaaraatka | Baydhabo Online
Mid kamid ah Dowladaha Carabta oo sheegtay in Soomaaliya ku abaal dhacday Imaaraatka
Waxaa sii xumaaday Xiriirka diblumaasiyadeed ee xiligan u dhaxeeya Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta oo mar kamid ahaa dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Dalka Bahrain Sheikh Khalid Binu Ahmed Al-Khaliif, ayaa ku eedeeyay Dowlada Soomaaliya in ay ku abaal dhacday abaalkii lama ilaawaanka ahaa ee u gashay dowlada Imaaraatka Carabta.
Qoraalka uu bartiisa Twitterka soo dhigay Wasiirka Arimaha Dibada Baxrain ayuu ku sheegay in Dowlada Soomaaliya marnaba aysan xusuusan wanaagii iyo waxtarkii Dawlada Imaaradka Carabta u gashay xiliyadii adkaa.
Waxa uu sheegay Wasiirka in Dowlada Imaaraarka Carabta wax badan usoo qabatay Soomaaliya sida dhinaca gar gaarka ah , la dagaalnaka kooxaha burcad badeeda, sidoo kale Imaaraatka lagu qabtay shirar Soomaaliya muhiim u ahaa.
Dowlada Baxrain ayaa kamid ah dowladaha Isbaheysiga la ah Dowlada Imaaraatka Carabta, waxaana warkan kasoo baxay Dowladaasi u muuqdaa mid lagu taageerayo Dowlada Imaaraartka Carabta.
Xiriirkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta ayaana isbuucan sii xumaaday, kadib markii Ciidamada amaanka garoonka Aadan Cadde ku qabteen lacag malaayiin Dollar oo Dowlada Imaarataka dalka soo galineysay.